I-TikTok Yezebhizinisi: Finyelela Abathengi Abafanelekile Kule Nethiwekhi Yevidiyo Yefomu Elifushane | Martech Zone
I-TikTok Yezebhizinisi: Finyelela Abathengi Abafanelekile Kule Nethiwekhi Yevidiyo Enefomu Elifushane
NgoLwesithathu, ngoMashi 24, 2021 NgoLwesithathu, ngoMashi 24, 2021 Douglas Karr
TikTok iyindawo ehamba phambili yevidiyo ephathekayo enefomu elifushane, enikezela ngokuqukethwe okuthokozisayo, okuzenzekelayo nokwangempela. Akungabazeki kangako ngokukhula kwayo:
I-TikTok inabasebenzisi abasebenza njalo ngenyanga abayizigidi ezingama-689 emhlabeni wonke.
Uhlelo lokusebenza lwe-TikTok lulandwe izikhathi ezingaphezu kwezigidigidi ezi-2 ku-App Store naku-Google Play.
I-TikTok ibalwa njengohlelo olulandwe kakhulu kunazo zonke ku-Apple App ye-Apple ye-Q1 2019, enokulandwa okungaphezu kwezigidi ezingama-33.
Amaphesenti ama-62 wabasebenzisi beTikTok e-US aphakathi kweminyaka eyi-10 nengama-29 ubudala.
I-TikTok ilandwe izikhathi eziyizigidi ezingama-611 eNdiya, okungamaphesenti angama-30 wokulanda okuphelele kohlelo lokusebenza.
Uma kukhulunywa ngesikhathi sansuku zonke esisetshenziswe ku-TikTok, abasebenzisi basebenzisa isilinganiso semizuzu engama-52 ngosuku kuhlelo lokusebenza.
I-TikTok iyatholakala emazweni we-155, nangezilimi ezingama-75.
Amaphesenti angama-90 wabo bonke abasebenzisi beTikTok afinyelela kuhlelo lokusebenza nsuku zonke.
Ezinyangeni ezingaphansi kwezingu-18, inani labasebenzisi be-TikTok abadala base-US lakhula izikhathi ezingama-5.5.
Kube nenani elijwayelekile lamavidiyo angaphezu kwesigidi esingu-1 abukwa nsuku zonke ngonyaka.
Umthombo: Oberlo - Izibalo eziyi-10 ze-TikTok Odinga Ukuzazi ngo-2021
Njengolunye lwezinhlelo zokusebenza ezithandwa kakhulu emhlabeni, iTikTok inikeza izinkampani ithuba lokufinyelela emphakathini omkhulu wabasebenzisi ababeka kuqala ezokuzijabulisa nobuqiniso.
I-TikTok Yezamabhizinisi ingelinye lamanethiwekhi ahlangabezane nokukhula okuphawulekayo ku-iOS (+ 52% share share). Inethiwekhi yokuxhumana nomphakathi inyukele endaweni eyi-1 ku-iOS yaya endaweni engu- # 7 nendawo engu-1 ekufikeni kwe-Android ku- # 8. Ezingeni lesigaba esiphambanweni, lifinyelele ezingeni eliphezulu lamandla ama-5 kwezokuzijabulisa, ezenhlalo, indlela yokuphila, ezempilo nokuqina, ezezimali, ukuthwebula izithombe, neqembu elisetshenziswayo.
I-AppsFlyer Performance Index
TikTok Izikhangiso Manager
Ngemenenja yezikhangiso zeTikTok, izinkampani nabakhangisi banokufinyelela ekubhideni nasekubekeni izikhangiso zangaphakathi nohlelo (I-IAA) noma qala ukufakwa kohlelo lokusebenza lweselula kuzethameli zomhlaba wonke zeTikTok nomndeni wazo wezinhlelo zokusebenza. Kusuka ekukhombeni, ukwenziwa kwezikhangiso, imibiko yokuqonda, namathuluzi okuphatha izikhangiso - TikTok Izikhangiso Manager ikunikeza ipulatifomu enamandla, nokho okulula ukuyisebenzisa ezokusiza ukuthi ufinyelele izethameli ezithanda imikhiqizo noma izinsizakalo zakho.
Ukubekwa Kwezikhangiso ze-TikTok namafomethi
Izikhangiso zakho zingavela kwenye yezindawo ezilandelayo ngokususelwa kuhlelo lokusebenza:
Ukubekwa kweTikTok: Izikhangiso zizovela njengezikhangiso ze-in-feed
Ukubekwa kwezinhlelo zokusebenza ezintshaIzikhangiso zizovela kulezi zindawo ezilandelayo:
I-BuzzVideo: kokuphakelayo, ikhasi lemininingwane, ividiyo ngemuva
I-TopBuzz: kokuphakelayo, ikhasi lemininingwane, ividiyo ngemuva
Babe: kokuphakelayo, ikhasi lemininingwane
Ukubekwa ngopende: Izikhangiso zizovela ku- njengezikhangiso ezidlalwayo, Izikhangiso zamavidiyo eziPhakathi, noma izikhangiso zamavidiyo ezivuzwe.
Imenenja yezikhangiso zeTikTok isekela zombili isithombe isikhangiso kanye isikhangiso sevidiyo amafomethi:
Izikhangiso Zezithombe - kungenziwa kube okwasendaweni futhi zombili i-PNG noma i-JPG zamukelwa ngesisombululo esiphakanyisiwe okungenani esingu-1200px ubude ngo-628px ububanzi (izikhangiso eziqondile zingabanjwa nazo).
Izikhangiso zevidiyo - kuya ngokuthi ungathanda ukuwabeka kuphi, ama-aspect ratios ka-9: 16, 1: 1, noma u-16: 9 angasetshenziswa ngamavidiyo amasekhondi amahlanu kuya kumasekhondi angama-5 ubude ku-.mp60, .mov, .mpeg, .4gp , noma ifomethi ye .avi.
Ukunikezwa kwe-TikTok Isifanekiso Sevidiyo, ithuluzi elenza ukudala izikhangiso zamavidiyo kusheshe futhi kube lula. Ungavele wenze isikhangiso sevidiyo ngokukhetha isifanekiso bese ulayisha izithombe zakho, umbhalo, namalogo.
TikTok: Ukulandelela Imicimbi Yewebhusayithi
Ukuguqula abasebenzisi be-TikTok kubasebenzisi bewebhusayithi abangavakashela noma bathenge imikhiqizo noma izinsiza kusayithi lakho kulula ngephikseli yokulandelela ye-TikTok.
TikTok: Ukulandelela Imicimbi Yangaphakathi nohlelo
Lapho umsebenzisi echofoza / ebuka isikhangiso futhi ethatha ezinye izinyathelo njengokulanda, ukwenza kusebenze, noma ukuthenga ngaphakathi nohlelo ngaphakathi kwewindi lokuguqula, ama-Mobile Measurement Partners (MMP) aqopha futhi athumele le datha ku-TikTok njengokuguqulwa. Imininingwane yokuguqulwa, kusetshenziswa isichasiso sokuchofoza okokugcina, bese ikhonjiswa kuMphathi Wezikhangiso zeTikTok futhi iyisisekelo sokusebenziseka kwesikhathi esizayo kulo mkhankaso.
I-TikTok Yokusetshenziswa Kwebhizinisi Ikesi: Slate & Tell
Njengesitolo sobucwebe esizimele, uSlate & Tell bebefuna ukwakha ukuqwashisa nokucatshangelwa ngezikhathi zokuthengisa eziphakeme kakhulu. Ngokusebenzisa i-TikTok Ithuluzi elisebenziseka kalula le-Smart Video Creative nokwenza imikhankaso ibe nemicimbi, bakhe ubuciko obumnandi nobudingidayo obufinyelele kubasebenzisi be-4M TikTok futhi kwaholela kuseshini eyodwa eyi-1,000 XNUMX Engeza ekalishini ukuguqulwa, kubasize bafeze inhloso yabo yokubuyisa okungu-2X ezinyangeni eziyisithupha nje kuphela.
Qala ku-TikTok Namuhla!
Tags: b2cUkukhangisa kwe-b2cukukhangisa kwabathengisikaMahaziyaukukhangisa okungaphakathi nohleloukufakwa okungaphakathi nohleloukukhangisa okuhambayoTikTokukubekwa kwesikhangiso se-tiktokumphathi wezikhangiso ze-tiktoktiktok zebhizinisiizibalo ze-tiktokimicimbi yewebhusayithi ye-tiktokizikhangiso zevidiyoukukhangisa ngevidiyo
I-UpLead: Yakha Uhlu Olunembile lwe-B2B Prospect To Power Campaign kanye Nokuthengisa Okuvaliwe